Koonfurta Ossetia: Ruushka oo ku xididaystay Georgea | Saxil News Network
Image captionXusuustadadkii South Ossetians ee lagu dilay gantaaladii Georgian xilligii dagaalka
Ruushka ayaa halkaasi ciidamo geeyo waxa ayna ka saareen ciidamadii Georgia Ossetia iyo Abkhazia, waxa ayna xukuumadda Moscow u aqoonsan tahay in ay yihiin “Dalal madaxbanaan”.
Waxaa loo socanayaa muddo hal saac ah xudduuda casimadda Koonfurta Ossetia Tskhinvali – mana jiro wax basas ah ah ama tareen halkan ka shaqeeya.
Image captionWaa dhismo ku yaalla Tskhinvali oo wali uu raadka dagaalka ka muuqdo
Dhagxaanta yaalla goobo buuralay ah ayaa waxaa lagu qoray erayo sida “Ruushka Wuu mahadsan yahay”.
Image captionKhariiradda Georgia
“Waxa aan dareemay sida iyada oo uu cirka soo dhacayo iyo sida iyada oo caalamku uu soo daba dhamaanayo,” waxa sidaasi sheegay Tamerlan Tadtaev.
“Waa markii iigu horreeysay oo aan arko gantaalo, aad ayaan ugu faraxsanahay faragalintii Ruushka, haddii aysan sidaasi samayn lahayn maanta kulama hadleen” ayuu inta ku daray.
Waddada aadda dhanka Ruushka ayaa waxaa ku dhagan boor uu ku sawiran yahay cunug ooynaya oo lagu hoos qoray taariikhda 08.08.08 – oo ah maalinkii ay ciidamada Georgia ay soo galeen gobolkaasi.
Image captionKorneelGiga Dzhincharadze oo ak mid aha ciidamadii Georgia ee ak howlgali jiray South Ossetia
“Waa dhaawac dib u billaabmaya mar walba oo la gaaro 8 bisha August,” waxaa sidasi sheegay Korneel Giga Dzhincharadze, oo isagu goob joog ka ahaa dagaalkii Koonfurta Ossetia 10 sano ka hor islamarkana ay askar badan uga dhinteen.
“Sanaddii 2008, dad badan oo ku sugnaa Berlin iyo Paris, sida kuwa ku sugan imika Washington,waxa ay rumaysan yihiin Putin in uu yahay nin wanaagsan oo lala shaqaysan karo ,” waa sida uu sheegayo Gela Vasadze, oo ah nin falanqeeya siyasadda oo kuna sugan Georgia.
Image captionBoor ay ku qorantahay halkudhig : “Waxa aan difaacaynaa xudduuda, waxa aan difaacayna nabadda “
“Cidna ma doonayn in ay Ruushka la muranto sababtoo ah Georgia oo ah dal yar ” ayuu intaa ku daray.
Image captionMid ka mid ah saldhigyada militariga ee ku yaalla South Ossetia
Marka aan dib ugu soo laabano gobolka Koonfurta Ossetia dadka ayaa waxa ay ku tiirasan yihiin miisaaniyadda Ruushka waxaana aad u yar shaqooyiinka